Tranon-tsarintany fantsom-baovaon'ny bus
Famonoana ny famonoana ny famonoana afo
Fanatonana ny sisin'ny sampana
Blake terminal block
DIN-lalamby karazana fifandraisana fifandraisana
Angovo famaranana ny angovo
Mavesatra faran'ny terminal ankehitriny
Fanatonana fantsom-pifandraisana misy tanjona
Fantsom-pifandraisana mampiakatra tena
Fanakatonana ny vata fametrahana boaty
Fanakanana sisin-tany Zero
Boaty fantsom-pahamarinana rano
Boaty valizy vita amin'ny fandroahana
Ireo fizotry ny fanamboarana
Ny foiben'ny varahina miorina amin'ny basibom-baravarankely ifotony, izay mifamatotra ary nohamafisina tamin'ny varahina vita amin'ny varahina sy sakana mitovy amin'izany.
Ny varahina metaly dia ampiasaina ho andalana varahina ifototra satria lafo vidy ny varahina amin'ny metaly ampiasaina ho toy ny conducteur, ary miadana amin'ny rivotra sy ny rano noho ny vy sy masika. Kely ny fanohitra ifotony. Ny vy mahamay be haingana amin'ny rivotra sy ny rano, ary lehibe ny fanoherana azy. Izy io no fidirana ifotony vita amin'ny vy, ka ny fitaovana mifandraika dia eo amin'ny equipotential.
Any an-tanànan'i Yueqing, Wenzhou, renivohitry ny fitaovana elektrika no renivohitr'i China Haiyan. Manakaiky ny lalana 104 an'ny làlana nasionaly izy io, ary tena mety ny fifamoivoizana. Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fanaovana fitiliana feno, dia famokarana, fikarohana ary fampandrosoana, varotra toy ny iray amin'ireo orinasa avo lenta. Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana boaty fiasana herinaratra herinaratra, terminal boaty metatra herinaratra, terminal terminal lehibe misy ankehitriny, terminal maro, fametrahana terminal, T terminal, fihenam-bolo miady amin'ny zotram-piaramanidina volavolan-dalamby, vatan-tsabatra mampiasa fihenam-bidy, alàlan-kianja fampiasan-tena amin'ny alàlan'ny kianja. mifamadika, mpampifamadika angovo vaovao sy fitaovana fampiasa an-tariby samihafa
Ny ekipa dia manana ekipa mpitantana maoderina sy mpiasan'ny fikarohana siantifika, ary manana mpiasa maherin'ny 500, izay manana 60 mahery no manana lohateny ara-teknika maoderina sy mandroso. Ny orinasa dia manana vokatra mihoatra ny 100, ary misy karazana 1800 voafaritra manokana. Ny vokatra rehetra dia vokarina mifanaraka amin'ny fenitra IEC sy ny fenitra nasionaly sy indostria. Ny vokatra dia nandalo ny fanamarinana CCC, fanamarinana CQC ary ny fanamarinana CE, ary maro amin'izy ireo no nahazo ny patina nasionaly. Ny orinasa dia nandany ny fanamarinana momba ny rafitra momba ny kalitao ISO9001: 2008, ary nomena ny zon'ny fanjakana amin'ny fampandehanana mahaleo tena ny fanafarana sy ny fanondranana.
Miorina amin'ny fitsipiky ny "oriented-oriented", miankina amin'ny teknolojia vaovao sy ny vokatra vaovao, ny orinasa dia miraikitra amin'ny vokatra manana kalitao sy fivoarana tsara amin'ny fanatanterahana ny fitakian'ny tsena. Ny vokatra dia natolotry ny biraon'ny indostrian'ny herinaratra. Amidy any amin'ny firenena manontolo izy ireo izao ary aondrana any Eropa, Amerika, Azia Atsimoatsinanana, Moyen Orient ary tsena iraisam-pirenena hafa.
Mifanaraka amin'ilay tarehimarika momba ny «azo antoka sy maharitra, ny mpisava lalana ary ny fametrahana antoka», ny orinasa dia manizingizina foana fa ny tsena no fiandohan'ny orinasa, ny mpanjifa no fulcrum ny orinasa, ary ny fahafaham-po ny mpanjifa no fenitry ny serivisy amin'ny orinasa. Tohizo hatrany ireo fotoana ary manavao tsy tapaka, amin'izay ny orinasa dia mijoro hatrany amin'ny laharana voalohany ary mitarika ho amin'ny orinasa.
Mba hisaorana ny mpanjifa noho ny fanohanan'izy ireo sy ny fiaraha-miasa maharitra sy ny hanokafana ny sehatry ny asa aman-draharaha vaovao, dia raisinay am-pitiavana ireo mpanjifa vaovao sy antitra ao an-trano sy any ivelany ary olona avy amin'ny fiainana rehetra hitsidika sy hitarika, hanao fifampiraharahana sy miara-mandroso.
Tongasoa eto ny rehetra hitsidika ny orinasanay, na baiko an-tserasera, fampahalalana bebe kokoa momba ny boaty fiasana .
Wengyang Town Industrial Park, Yueqing City, Faritanin'i Zhejiang
0086-13968745082 (Atoa Eric, talen'ny mpitantana)
Miezaka izahay hanome ny vokatra kalitao ny mpanjifa. Mangataka fampahalalana, fakana ohatra & fangatahana, Mifandraisa aminay!
Sitemap hafa fiteny
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Tohanana ara-teknika: volamena